Wedding ee caddaan: qurxinta, dhar, bouquet of aroosadda, suubban ee arooska. Wedding in casaan-cas, buluug, cagaar
Arooska caddaan: fasax daahir iyo daahir la'aan
Midabka cad ayaa weli ah midka ugu muhiimsan ee qurxinta dabbaaldegga arooska. Waa mid fudud oo kooban. Waxay u eg tahay warqad faaruq ah, taas oo sahal u ah sawir kasta. Haddii aad ku riyoonayso aroos caddaan ah, ka dibna waxaan kuu sheegi doonaa sida ay si habboon u wajahayso qurxinta.
Qiimaha midab cad
Calaashu waxay la xiriirtaa nadiifnimada, daahir la'aanta iyo dhammaystirka. Baaxada midabkeedu yahay ee quruxda badan ee quruxda badani waxay suurtogal u tahay in la abuuro dareen ah nabad iyo raaxo.
Haddii aad dooratay caddaan ah midka ugu muhiimsan, waxa loola jeedaa inaad isku dayeyso inaad bilowdo nolosha bilowga nolosha qoyska. Gabdhaha oo jecel soodhadhka barafka waa kuwo madaxbannaan oo caddaalad ah. Waxay rabaan wax walba oo ay noqdaan kuwo aad u fiican. Waxay u muuqdaan inay amar ku bixiyaan wax walba oo ku wareegsan, sida ay keeneyso nabadda, nabadda, iimaanka mustaqbalka. Marka guurka, gabdhaha noocan oo kale ah waxay sii wadaan inay badiyaan naftooda. Waxay isku dayayaan in ay sare u qaadaan heerka nolosha oo ay ka fogaadaan fowdo iyo walbahaar.
Aroosyada caddaanka ah ayaa badanaa lagu fekeraa faahfaahinta ugu yar, dhammaantoodna waa inay u hoggaansamaan sharciyo adag. Talo: Maalinta dhalashada qoyska waa fasax halka aroosadda iyo arooska yihiin astaamaha ugu muhiimsan. Naftaada ha iska tago, ha naftaada ha raaxaysato, nacasta, iyo xitaa khaladaad. Dareen buuxa ee nolosha.
Iyada oo midabkiisu yahay midab cad
White sidoo kale waa ku fiican yahay, maxaa yeelay waxa lagu dari karaa mid kasta oo midab kale, iyada oo aan loo eegin xoogooda. Doorashada caadiga ah ee arooska waa quraarad cad oo buluug ah. Mawduuc ayaa xasuusin doonta badda haddii aad ka fogaato sifooyinka khuseeya. Qalab dheeraad ah oo loogu talagalay abaabulaha muusikada ayaa noqon kara casaan.
Naqshad cad iyo casaan waa doorasho aan la dabooli karin. Dareeraha iyo casaan-dhalaal-yar-yar oo xasilan iyo qabow oo qabow - miisaankii ugu wanaagsanaa ee barafka iyo ololka.
Cagaar iyo cagaaran, xitaa xilliga qaboobaha waxay siin kartaa niyad iyo farxad farxad leh.
Caddaan iyo jaalle - waa isku-dheelitir wanaagsan, firfircoon oo xoog leh. Calaamad yar ayaa "tirtir" xoogga jaalaha, sababtoo ah "xaafaddan" waxay noqoneysaa mid raaxo leh isha.
Xulashada suurtogalka ah iyo mid yar oo midab-kala-soocid ah midabka: caddaan iyo orange, fuchsia, turquoise, jajab. Guud ahaan, wax kasta oo ay naftu rabto.
Markaad samayso naqshad adeegsanaysa caddaan, waxaad ku adkaan kartaa qalad. Xitaa haddii aad go'aansato inaad sameysato arooska monochrome, ma aha oo kaliya ku haboon, laakiin raaxo iyo hal abuur leh.
Qurxinta arooska cad
In kasta oo xaqiiqda ah in caddaan si firfircoon loo isticmaalo qurxinta arooska, dhowr qof ayaa halis u ah inay abuuraan naqshad cad oo cad. Oo iyadu i rumeyso, waxay samayn kartaa aragti la yaab leh.
Wixii aroosyada qaboobaha ah, isticmaalka ballaaran ee caddaanku waa ku haboon yahay: miisaska, napkins, kursiga kursiga, daboolka, iwm. Isticmaalka qadarka lacagta ah (qurxinta casuumada, qalabka lacagta). Qalabka ubaxa, waxaan soo jeedineynaa in aad dooratid qolal dhalaalaya ama quraarado qurxin leh oo lagu qurxiyo barafka casriga ah ee Swarovski oo si fiican u dhalaalaya. Xilliga xagaaga ee arooska caddaanku wuxuu noqon doonaa asal u wanaagsan dabiiciga ku xeeran: caleenta cagaaran, iftiinka qoraxda, samada buluugga ah. Ku qurxiyo kuraasta qafis iyo qaanadaha. Daaqada waxaa laga samayn karaa faransho cad. Waxyaabaha ka mid ah midabada isku mid ah ayaa qurxin doona marinka meeshii allabariga. Ku martiqaad martida inay xirtaan dharka cad iyo dharka, waxay kaliya u muuqan doontaa xiiso iyaga. Laakiin aroosadda, inay ka soo horjeedaan asalka guud, waxa fiican in la siiyo doorbidid dharka arooska midabka leh. Tan iyo munaasabada waa xagaaga oo ku dhaca dabiiciga ah waxay noqon kartaa jaalaha, fawaakih, naas, turquoise ama labiska dharka. Aboteosis wuxuu noqon doonaa keega arooska badan oo cufan leh oo qurxin leh midabyo jilicsan.
Bouquet of aroosadda
Inta badan, ubaxu waxay amar ku bixiyaan baleqda cad ee aroosadda. Waxay ku haboon tahay nooc kasta oo ka mid ah dibedda iyo wadajirka, xulashada midabyada waa weyn oo kuu ogolaanaya inaad ku soo koobto wax ka kooban. Intaa waxaa dheer, ubaxyo cad oo gacmaha gabadhu u socoto meeshii allabariga - calaamad u ah nadiifinteeda.
Waxaa jira xeerar dhowr ah oo lagu xasuusto marka la dooranayo bouquet:
Haddii aadan rabin in ubaxu la midoobaan dharka, dooro iyaga oo ah 1-2 dabeecado madow ama hooska leh cagaarka
Blondes waa inaysan sawiradooda ka dhigin mid cad. Ku dar faahfaahin cad oo ku saabsan qaabka ubaxa, waa ka wanaagsan haddii uu yahay hooska oo xoogga saaraya midabka indhaha.
Ha ka baqin in aad ku darto waxyaabo dhowr ah oo dhalaalaya. Waxay soo jiidan doonaan dareenkaaga.
Doorashada ubax cad ayaa dhab ahaantii aad u weyn. Waxaad samayn kartaa qaabab farshaxan ah, callas, orchids, daffodils, rinkets, chrysanthemums, pions, gerberas, daisies, tulips, anemones, Fiiriya ubaxyada dooxada, chamomiles iyo freesias.
Bouquets wareega yaryar ee dhufaysyada ayaa xoojin doona xarrago iyo aristocracy. Waxaa lagu kabi karaa mitraga iyo cagaarka ama lagu qurxiyo luul iyo kareemo.
Callas waxaa doorbideya gabdhaha casri ah. U qurxiyaan afkoda leh cajalad leh ama midka kale, ku dar waxyaabo dhalaalaya.
Iskudhiridda peonies abuuraan dareen dabbaaldeg ah. Tani waa doorasho cajiib ah ee guga iyo xagaaga hore.
Tulips u eeg si aad u qabow oo ku haboon aroosyada yar yar.
Recently, badan oo caan ah waa bouquets of gabbaldayaha. Marka hore - chamomile. Waxaa lagu kabi karaa boorashka yaryar ama carnations.
Sida laga soo xigtay tirakoobka, 95% raga ayaa aaminsan in aroosadda ay tahay in lagu dhejiyo dharka cad ee dharka, iyo gabar kasta oo ka timaada caruurnimada caruurnimadu isku dayeyso inay ku dayato aabaha raaxada leh.
Cuntada kale ee caddaanka ahi waa inay ku habboon tahay nooc kasta oo muuqaalka ah, oo xoogga saaraya nimcada iyo jilicsanaanta. Waxa ugu muhiimsan waa in la doorto silhouette saxda ah. Gabdhaha leh qaababka khafiifka ah waxay ku habboon yihiin dharka tooska ah ama qaabka "mermaid". Laakiin, tusaale ahaan, miskaha cirifka ayaa ka caawiya inuu qariyo maro "princess". Aragga si muuqata u kordha naasuhu waxay ka caawin doonaan dharka dusha sare ee kooxda. Si aad u dheerayso silhouette oo aad wax yar sameyso waxay caawin doontaa tareenka (tan ugu muhiimsan, ha qaadanin waqti dheer, haddii kale dhammaadka fiidkii waxa uu khatar u yahay inuu noqdo wasakh).
Naqshadayaasha moodooyinka waxay bixiyaan musqulaha dhadhan kasta. Sidaa daraadeed Vera Wang waxaad ka heli kartaa labiska dharka tooska ah ee la jarjarey, iyo qalabka casriga ah ee la isku qurxiyo. Sedexda xilli ee la jaanqaadi karo waa iswijishinimo leh dhar badan.
Qaadashada iyo qalabka wax lagu dhejiyo, xargaha laysku dhejiyo, iyo suunka ama suunka ayaa kaa caawin kara inaad keento qoraal cad. Ha iloobin qalabyada: waxay noqon kartaa dabool, koofiyad yar oo leh ilxad ama ubax weyn. Ka taxadar dharka arooska dharka dheer. Waxay u muuqataa mid aad u fiican.
Si ay u taageeraan sawirka barafka-cad ee arooska aroosadda arooska ayaa kaa caawin doona. Waxaa lagu dhejin karaa shaati iyo faashad ku taala codka ama waliba dhinaca kale, oo leh roodhyo kala duwan: madow, buluug, iwm.
Si aad ujirto xayndaabku kuma duugin muraayada cad ee jaakada, qurxin ubax leh cagaar ama dooro midab kala duwan, adigoon iloobin inaad sameyso wicitaan codsi leh bouquet.
Sidoo kale waxaad xiiso u yeelan doontaa maqaalada:
Aroos Dahir ah: samee waxyaabo ay ka mid yihiin
Arooska Turquoise: sameyska xafladaha xeebta ee midabada badda
Wedding at hoos mugdi ah: qoob ka ciyaarka
Wedding in midab buluug ah: dabbaaldegga jannada
Fikradaha loogu talagalay naqshadda albumka
Sidee loo xariira xiriirka guurka?
Kabaha sare ee cirifka
Sida loo isticmaalo aroos aan caadi ahayn
Aragtida noolaanshaha: arooska arooska indhaha cagaaran
Dhammaan ku saabsan heshiiska guurka
Kalluunka kudheer oo la qalajiyey abrikotka iyo basasha
Horoscope for 2010 - haweenay cagaha
Maqasuska anti-viral lugada
Sheekooyinka taariikhda Julian Mac Mehon
McDonald ayaa dharbaaxo ujeedka hamburgers
Tatyana Navka iyo Dmitry Peskov ayaa ku dhawaaqay taariikhda arooska
Maraq foosto ah
Dhaawacyada, shilalka carruurta
Uurka iyo fasaxa umusha
Sida loo dhaqmo shaqo cusub
Maraq qudaar leh ukun quail
Sharciga kirismaska: sida loo siiyo dhibcaha saaxiibkaaga
Xannibaadda caloosha ka dib dhalashada
Ingiriis Cunto kareysa
Fikradda dhakhtarrada ku saabsan dillaaca